Elle Magazine ကို 'ကျွန်မရုပ်ရှင်ဆက်မရိုက်ချင်တော့ဘူး။ လယ်ယာအပိုင်လေးဝယ်ပြီး လယ်အလုပ်ပဲလုပ်ချင်တော့တယ်။ ဆိတ်လေးတွေမွေးပြီး ဆိတ်နို့ထုတ်ရတာ၊ ဆိတ်ကျောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့' လို့ သူမကပြောကြားခဲ့တာပါ။
၂၀၁၀ - Winter's Bone ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနေစတင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့တဲ့သူမဟာ The Hunger Game, X-Men ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့လည်း အောင်မြင်မှုတွေပိုတိုးလာအောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ၂၀၁၈ မှာရုံတင်ပြသမယ့် X-Men: Dark Phoenix ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေရသေးတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ပရိသတ်တွေနဲ့ အလှူလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ ဘီလီလမင်းအေး
ဘီလီလမင်းအေးဟာ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျကနေ အစီအစဉ်လေး တစ်ခုကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မဆုံတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘီလီဟာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတွဲကာ အလှူလေး လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်တဲ့။
"ညီအကိုမောင်နှမ များအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ဖူး page ကနေ ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာ နဲနဲ ကြာပြီနော် သတိရ နေကြသေးလား ဟင်
ညီ အစ်ကို မောင်နှမတွေ နဲ့ စုစုစည်းစည်း မ ဆုံဖြစ်တာ ကြာလို့ အားလုံး နဲ့ အတူတူ ခရီးသွားဖို့ ဆုံ ဖို့ စီစဉ်နေတာ တစ်ခု ရှိပါတယ်
ဖူးက အခု လာမဲ့ ၂၅ ရက်နေ့ ခရစ်စမတ် ပိတ်ရက် မှာ ညီအကို မောင် နှမ တွေ နဲ့ အတူတူ မြို့လေး တစ်မြို့မှာ နွမ်းပါးကလေး ငယ် တွေ အတွက် အလှုလေး တစ်ခု အတူတူ သွားလုပ် မလို့ပါ။
အဲ့ဒါ ဘယ် မြို့ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ လေး ကို ဖြေကြည့်ကြမလား ဟင်?
ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံးကို လဲ အတူတူလိုက်ဖို့ ဆုံကြဖို့ ဖိတ်ချင်ပါတယ်
အဲ့ဒါ ဘယ်သူတွေက ဖူးနဲ့ ရန်ကုန် ကနေ အဲ့မြို့လေးကို အတူတူ ခရီးသွားချင် ကြလဲ ဆိုတာရယ်
ဘယ်သူတွေက အဲ့ပွဲကို လာချင်တယ် ဆိုတာကို ပြောသွား ပေးကြမလား?
ညီအကိုမောင်နှမ များ အားလုံး ..ကို
Merry Christmas လို့ အကြို ပြောထားမယ် နော်
အားလုံးနဲ့ အရင်က အတူတူ အလှူလုပ်ခဲ့ကြဖူး တဲ့ အချိန်လေးတွေကို သတိ ရနေမိတယ်" ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီလီကတော့ လက်ရှိမှာ ခရီးတွေ သွားဖြစ်နေသလို သူမရဲ့ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်အခွေအတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘီလီလမင်းအေးဟာ Myanmar Idol အစီအစဉ်ကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကားတွင် လိုအပ် မည့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအ၀င်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက ကူညီပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သာသနာ ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းအုံက ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသုံးပြုခဲ့သည့် အဆောက်အအုံများ အပါ အ၀င် လေယာဉ်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
‘‘ကာကွယ်ရေးနဲ့ ဆက်စပ်တာတွေ၊ ယမ်းဖောက်ခွဲတာတို့၊ လက် နက်၊ အ၀တ်အစားတို့ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီဟာတွေကို ကာကွယ်ရေးက ထောက်ပံ့လိမ့်မယ်’’ ဟု ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ကျင်းပ သော (၁၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ စာကြည့်တိုက်မှူးညီလာခံ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တွင် ၎င်းကမီဒီယာများအား ပြောသည်။လက်ရှိတွင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး ရေးအတွက် ၀န်ကြီးဌာနများက ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုံခြုံ ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ထောက်ပံ့ရေး အစရှိသည့် ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဦးထွန်းအုံကပြောသည်။
‘‘ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကဏ္ဍတွေအားလုံးကို ၀န်ကြီးဌာန တွေက ကူညီပါမယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကို ယခင်က ကျပ်သိန်းသုံးသောင်း အကုန်အကျခံရိုက်ကူးရန် ရည် ရွယ်သော်လည်း လက်ရှိဇာတ် ကားရိုက်ကူးရန် သိန်းရှစ်ထောင် ခန့်သာရှိသောကြောင့် ဇာတ်ညွှန်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနေ ကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမည့် ဒါ ရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးက ပြောကြားထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၂၀၁၈ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်တွင် စတင်မည် ဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်အချိန်ယူဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် သမိုင်းအထောက်အထား လွဲမှား မှုမရှိစေရေး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းကော်မတီကို ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်စွဲဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကော်မတီတွင် သာ သနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရ ဦးအောင်ကိုက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ရုပ်ရှင်အနုပညာ ရှင်များအပါဝင် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများက ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မည် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းပြီး အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက် (၁၀၀) ပြည့်မြောက်သည့် ၂၀၁၅ ၌ ရုံတင်ပြသနိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှစ်(၁၀၀)ပြည့်တွင် ရုပ်ရှင်ရိုက် ကူးရေး အလှူငွေရှာရန် အမြည်း နမူနာသာ ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ယင်းနမူ နာကိုလည်း ဝေဖန်မှုများ ရှိခဲ့သည်။